747-8F Na-aga mgbe a kwadoro ya? 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1313
Maka ihe ụfọdụ na-adịghị mma, 747 na-agagharị mgbe agbadoro ala. onye ọ bụla mara ihe mere?
747-8F Na-aga mgbe a kwadoro ya? 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1348
747-8F Na-aga mgbe a kwadoro ya? 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1350
Ee, agbaji set. Ọ na-akwụsị na-aga n'ihu mgbe m malitere engines. Nke kachasị njọ, akụkụ kachasị njọ bụ na oge ụfọdụ mgbe ị na-egwu AirHauler, ọ na-ebu ụgbọ elu ahụ n'ihu ụlọ. Ọbụna tupu enwere m ohere ịmalite, ọ na-agafe na nso nso ụlọ ma na-akpata mberede ... \_ \_ _ _ (ツ) _ / ¯
Ndumodu ikpe azu: site TheFinnishDude.